Priya Prakash oo ku sigatay inee jabiso iskooro u yiilay atirishada Tv-yada ka shaqeysa Kylie Jenner iyo halyeeyga kubada cagta Cristiano Ronaldo! | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Priya Prakash oo ku sigatay inee jabiso iskooro u yiilay atirishada Tv-yada ka shaqeysa Kylie Jenner iyo halyeeyga kubada cagta Cristiano Ronaldo!
Priya Prakash oo ku sigatay inee jabiso iskooro u yiilay atirishada Tv-yada ka shaqeysa Kylie Jenner iyo halyeeyga kubada cagta Cristiano Ronaldo!
Priya Prakash waa gabar kasoo jeeda Malayalam ahna gabar fanka kucusb 18 sano jirna ah, gabadhaan ayaa hogaanka Internetka heysa saacan la joogo aalad walba oo Internet-ka ahna ayada ayaa la hadal hayaa.
Priya waxaa sanadkaan u soo bixi doono filmkeda kowaad ee Malayalamka ah Oru Daar Love kaaso la daawan doono 3 Maarso ee sanadkaan 2018.
Priya ayaa Clip yar kasoo qaaday hees kujirta filmkeda Clip-kaaso ah xidigtaan oo iljabineyso waxayna soo dhigtay baraha bulshada markee soo dhigtay ilaa hada qof walba waxaa soo jiitay qaab gabadhaan il jabinta quruxda badan u sameynesa taasi oo kaliftay inee taagerayaasheda daqiiqad walba sii kordhaan.
Priya waxay ku dhowaatay inee jabiso iskooro horey ugu yiilen xidigo caan ah kuwaaso kala ah Kylie Jenner oo ah gabar Tv-yada Hollywoodka ka shaqeyso sido kalena Maku-up-ka caan ku ah iyo waliba halyeega kubada cagta Cristiano Ronaldo.
Priya mudo 24 saac ah ama halmaalin waxa barteda Instagramka ku xirmeen ama ay heshay dad gaaraya 605 kun oo qof waxayna ku dhoowatay inee jabiso iskorada Ronaldo iyo Kylie maadama Kylie ay mudo hal maalin ah barteda Instagramka yeeshten ama ay heshay taagero dhan 806 kun oo qof waana iskoor u gaar ah xidigtaan.
Sido kale Ronaldo maalinti kowaad bartiisa Instagramka waxaa kudarsadeen ama shacbiyad ahaan uu helay 650 kun oo qof sidaa awged iskooradan waxay u gaar ahaayen Kylie iyo Ronaldo hadase waxaa la dhihi doona Priya ayaa soo sedexeesay oo sedexda qof ee hal maalin gudaheda dadka ugu badan kasbaden barta Instagramka aye sidaa ku noqdeen xidigahan.
Priya hader mudo 48 saacadod ah waxay heshay dad dhan 1.7 Million oo qof barteeda Instagramka kaliya waxaana xusid mudan in daqiiqad walba ay sii kordhayaan shacbiyadeeda 18 jirtaan maadama qof walbe daawanayo il jabinteda quruxda badan.
Halkaan Hoose Ka Daawo Clip-ka Yar Ee Xidigtaan Ku Qabsatay Baraha Bulshada:
Waxaa Aqrisay 1,766
One Response to Priya Prakash oo ku sigatay inee jabiso iskooro u yiilay atirishada Tv-yada ka shaqeysa Kylie Jenner iyo halyeeyga kubada cagta Cristiano Ronaldo!
videoyga kale ee la sooo dhigay facebooka ee isla inanka ay jilayaan il jabinta soo dhiga kaasaa wareeree